Your Link Title Here
Fifanambaniana ifanaovan’ny samy malagasy eo amin’ny tsy fahaizana ny teny vahiny.
Miarahaba antsika rehetra malagasy namako! Sambany aho no mba manoratra toy izao eto amin’ity blaogy ity, ary tena faly aho fa afaka mizara sy maneho ny hevitro rehetra mikasika ny zavatra tsapako sy hitako eo amin’ny lafiny maro, mba iarahantsika rehetra mandinika sy mamakafaka na mitsako. Eny, mety afahantsika miara-mitombo amim-pahendrena ihany koa, saingy miankina amin’ny tsirairay ihany anefa izany, satria samy manana ny foto-pisainany avy. Araka ny efa hitantsika amin’ny lohateny dia efa mazava avy hatrany ny zavatra tiako ho voaboasana etoana, koa raha misy ihany koa fanehoan-kevitra tianao asongadina manoloana izany, dia aza misalasala mizara aorian’ny famakianao ny lahatsoratra tompoko. Misaotra indrindra!
Tsy vao izao na vao omaly no efa nanomboka nitsiry tao anaty foto-pisainan-dRamalagasy izany atao hoe fanesoana ny hafa izany raha vao mba misy fahadisoana kely ataony, na eo amin’ny lafiny inona io na inona. Avy ao anatin’izany indrindra no tiako hanasongadinana manokana ny resaka fanambaniana atao amin’ny tsy fahaizan’ireo olona sasany ny teny vahiny.
Efa voazanaka tokoa mantsy i Madagasikara fahiny, ary tsy misy hifanomezan-tsiny ny fihazonana ny tenim-pirenen’ireo nanjanaka mba hifaneraserana anaty tontolo maro ara-panjakana, toy ny sehatry ny fitondrana ambony, sehatry ny fampianarana sy ny fitantanana orin’asa sns.
Efa miroborobo be ihany koa amin’izao ny fifandraisana ataon’ny malagasy amin’ireo karazan’olona maneran-tany amin’ny alalan’ny tambazotra serasera…, noho izany tsy vitan’ny teny vahiny iray intsony no voatery ampiasaina fa mitombo maromaro ihany. Betsaka ireo mana-talenta ao anatin’izany, indrindra fa ny tanora. Ary tsy vitsy no mandeha mirona mankany amin’ny tontolon’ny teny mba hanatsarana ny hoavy eo amin’ny …
Oktobra 11th, 2019
Tonga soa eto amin’ny Blaogin’ny Namana Serasera. Ity no lahatsoratrao voalohany. Azonao ovaina na fafaina ito ao amin’ny fandrindrana!
Oktobra 3rd, 2019
Tonga soa eto amin'ny Blaogin'ny Namana Serasera. Ity no lahatsoratrao voalohany. Azonao ovaina na fafaina ito ao amin'ny fandrindrana!
Blaogin'i Tara-masoandro is proudly powered by WordPress
Funky Beat is designed by: b.hafner